Internet ayaa ilaha waaweyn ee maaweelada ugu yaraan abid tan iyo qarnigii this. Waa sidaas cad in aad mararka qaarkood laga yaabaa in ay dhagaystaan ​​music weyn online ah ama laga yaabo in xitaa iyaga ku badbaadin in wadid aad u adag in la isticmaalo mustaqbalka. CD ilmahaagu leeyahay maktabad weyn oo muusiko ah in dhab ahaan qabsan doonaan ishaada ama halkii barbaro inaad fiiro. Baridaan wuxuu ku sifayn of music aad raadinayso meeshiisiina waa tan u noqon. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood wax guys waxaa laga yaabaa in dhibaato soo degsado music tan ururinta weyn. Haddii aad tahay mid ka mid ah ha ka welwelin ugu badan ee this article here yahay si wax looga fahmo sida aad u wadid aad u adag kala soo bixi kartaa music la AllMyMusic kale qalab-wondershare soo jiidasho leh.
Ku xiridda Wondershare AllMyMusic
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa download wondershare AllMyMusic si aad u computer. Dabcan, tani waxay ku xidhnaan doontaa madal aad socda. Tani waa si ay sheegayaan in dadka isticmaala Mac yeelan doonaan in ay raadiyaan ka duwan set-up ah in dhigooda daaqadahooda '. Haddii aad ordaya on click Mac ah oo ku saabsan http://download.cnet.com/Wondershare-AllMyMusic/3000-2168_4-75649643.htmlto soo bixi qalabka. Sidoo kale waxaad riixi kartaa link Tani soo bixi wondershare for your computer daaqadaha. Xusuusnow in doorasho oo keliya siin doonaa inaad hesho version tijaabo ah software ka dib oo aad ku bixin kartaa version a full of software ee kaliya 19 $ ah.
Wixii rakibo tijaabo ah riix batanka maxkamad bogagga ee links dambe oo soo bixi faylasha aad. Click on Double file Mudanayaasha (qaab .exe daaqado ama .dmg u Mac) oo raac talaabooyinka rakibo.
Ka dib markii la rakibey guul aad software, aad ku xidhan si aad u hesho interface ah taas oo u eg mid hoose-ku xiran tahay nooca aad socda.
Kuwa socda ee kombiyuutarada daaqadaha ka heli doontaa interface ah taas oo u eg tan mid. Just guji maxkamad lacag la'aan ah.
Degsado Music ka CD Baby
Ka dib markii la rakibey, waxa la joogaa wakhtigii si ay ugu raaxaystaan ​​faa'iidooyinka software this. Marka hore waa in aad u tagtaa biraawsarkaaga iyo raadiyo CD ilmaha. Si tan loo sameeyo, kaliya ku qor http://www.cdbaby.com/ on your browser.
Fiiri on kasta oo song aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in on sanduuqa raadinta sida ku cad oo sii qulquli.
Sida ugu dhakhsaha badan aad ku qanacsan tahay webigu aad raadinayso go inay wondershare AllMyMusic for Mac ama daaqadaha.
Hadda riix badhanka diiwaanka.
Your song in la diiwaan muuqan doonaa sida waa in aad aragto la qoraalada muusikada firfircoon ee suuqa kala. Waxa ugu fiican oo la software-ka waa in ay si toos ah lagu ogaan doonaa webigu aad mooyee dhibaato ah laga bilaabo dhan downloads. Waxa kale oo wanaagsan oo la wondershare AllMyMusic waa inaadan la yeelan doonaan in ay sugto cajalado aad halka ka eegay bogga isku mid ah. Waxaad multitask karaa oo xitaa ka tago page webigu ku ayadoo aan faraggelin ku horumarka download ah.
Helaan Music info
Faa'iidooyinka la noqdo user diiwaangashan la software waa in aad ku xidhay si ay u helaan oo dhan info music bixiyo CD ilmaha-xijiyaan sida ku sifayn, album, artistes 'magaca haddii ay aad danta. Dadka isticmaala maxkamad, waxaad weli heli kartaa in ay helaan info sida inkastoo xoogaa qaar ka mid ah xayiraad. In sidaa la yeelo, guji badhanka aqoonsado on track walxood oo ku yaalla xagga hoose ee aad duubay window- daaqad in keeneysaa in aad u qiimeyso mudnaanta aqoonsiga track arbushin ilaa doona. Riix qiimeeyo in ay tijaabiyaan.
Dhageysiga Your Music
Ka dib markii ay soo degsado aad dhab ahaan u baahan doontaa in aad baadhid ku music downloads iyo dhegaysan iyagii. Tani waxay sidoo kale waa mid fudud quruxsan sida yeelan doonaa oo keliya in aad u tagtaan inaad geeska bidix ee sare ee suuqa kala software iyo guji maktabadaha.
on riixaya Doorashadan, liiska heesaha oo aad soo bixi muuqan doonaa shaashadda si aad u aragto oo iyaga u ciyaaro.
Just click laba ka mid ah heesaha ugu liiska oo uu dhegaysan iyagii!
Sida fudud sida in, waxaad bilaabi kartaa riyaaqayaa music ka CD ilmaha iyo goobaha kale ee la this qalab la yaab leh. Oo kuwan oo dhan ayaa qalbigooda geliyey waa ineey adag tahay in aynan sababta aad u doonaa in aan sii ah isku day! Xusuusnow in aad kala soo bixi software ah oo dayac-tiraysa inuu helo kontaroolka guud ee CD ilmaha.
Best Tag Audio Software The Editor Wixii Windows / OSX / Linux
> Resource > Music > Sida loo Download Music ka CD Baby